Mitatu mitambo yemahara yako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Mitatu mitambo yemahara yako Apple Watch
Kubva nhasi uye mumazuva ari kuuya tiri kuzounza nhevedzano yemahara mitambo yevanoshandisa iyo Apple Watch. Muchinyorwa chino chekutanga tichagovana mitambo mitatu iyo yatinogona kuwana nguva yekunakidzwa, mitambo yakapusa asi tinogona kuishandisa panguva dzakananga kuti tirege kufinhwa. Zvine musoro kuti mitambo yacho haina chinoshamisa chekushambadzira uye hapana chinoshamisira chakagadzirwa, sekutaura kwedu mitambo yakapusa asi inotipa chinguva chevaraidzo chero kupi.
Iko hakuna zvimwe zvakawanda zvekutaura, iyi mitambo yakapusa uye yenguva dzisina kujairika saka tichaona matatu ekutanga akateedzana. Iyi mitambo vakasununguka Uye kunyangwe chiri chokwadi kuti vamwe vacho vanotipa zvakatengwa zvakatengwa, hazvina basa kubhadhara chero chinhu kuti utambe, kuti iwe unotofanirwa kuve ivo vanosarudza kubhadhara kubhadhara kuwedzera mamwe mavara kana akasiyana mabatsiro, asi munguva iyo Ndanga ndichitamba handina kana chandakabhadhara.
Yokutanga yatinozogoverana inonzi Mhepo Hockey Pfeka. Mumutambo uyu wakapusa tinogona kushandisa maawa uye unoridzwa nekorona yedigital, iri nyore uye inodhakwa.
Hockey Mhepo Wear - Mutambo wekutarisavakasununguka
Square Shiri Kutarisa Chichava chechipiri mune ino nhevedzano yemitambo. Mune ino kesi isu tinofanirwa kushandisa sikirini kuitira kuti shiri yedu isvetuke uye isingabate chero chinhu, kwete chikamu chepamusoro, chikamu chezasi kana zvikwere zviri pakati. Iwo mutambo unonakidza uye muropa.
Square Shiri Yekutarisa - Bvisa Jumpvakasununguka
Pakupedzisira mune ino yekutanga batch yemitambo yeApple Watch isu tinokusiira iwe yakafanana neiyo yapfuura asi mune ino kesi nejellyfish seye protagonist. Ndezve Jellyfish Tap, mutambo unonakidza kwazvo watichafanira kudzivisa kubata madziro echidzitiro nekungodzvanya pachiratidziri.
Medusa Toca - Clock mutambovakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mitatu mitambo yemahara yako Apple Watch
Podcast 11x30: Kumirira Kupererwa
Musi waApril 30 Apple ichazivisa mhedzisiro yezvemari yekota yekutanga ye2020